Ibhedi enye+ 2 futons
Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-2, Ibhedi encinci eyi- 1
Ndiza kwenza konke okusemandleni am ukubonisa ububele bobubele kwaye ndixhase uhambo lwakho lwaseJapan.
CWANGCISA I-1 DAY TOUR KWI-EDO ENCINANE
UKUFIKELELA: Thatha iJR KAWAGOE LINE ukuya eKAWAGOE STA. (7min)
Kukho amabala amaninzi okubona kwi-EDO ENCINANE. Ungathenga ipasi yosuku olunye(itikiti lebhasi) ukonwabela i-EDO ENCINANE. Izinto onokuzibona:
Uninzi lweNqaba alusekho namhlanje, kodwa umnyango kunye namagumbi ambalwa avulekele uluntu. Umoya ozolileyo ukwenza uzive ngathi ububuyile ngezo mini.
☆HIKAWA SHRINE☆ Idume ngamandla othando nomtshato. Unokubona amantombazana amaninzi amahle aseJapan anxibe ikimono apho ukuze athandazele uthando. Kwakhona kusoloko kukho umsitho womtshato waseJapan.
☆KURANO MACHI☆ Njengombindi we-LITTLE EDO, isitrato esixakeke kakhulu kunye neendawo ezininzi zokugcina iimpahla eziba ziivenkile ngoku. Bathengisa izimuncumuncu zakudala kunye nokutya, kumnandi kakhulu.
CWANGCISA 2 UKHENKETHO LWEMINI ENYE UKUYA KOMA SHRINE(고마신사) & SHODEN-IN TEMPLE
(Ilifa lamandulo laseKorea lihlala eJapan)
UKUFIKELELA: Thatha iJR KAWAGOE LINE ukuya KOMAGAWA STA. (12min)
I-KOMA SHRINE inikezelwe kumoya kaKoma-no Kokishi Jakko waseKokuryo. AmaKokuryoans yayingabantu abakhwele amahashe ababehlala ngakuMlambo iShokako welizwekazi laseTshayina. Ukuqhubela phambili ukuya kusingasiqithi waseKorea, bawuhlutha umhlaba ukusuka kumntla-mpuma weTshayina ukuya kumantla wePeninsula yaseKorea kwaye balawula apho iminyaka engama-700. Ngo-669, zonakaliswa kuhlaselo lwemikhosi emanyeneyo yaseTang naseSilla. Uninzi lwezihandiba kunye neemonki zamaBhuda ezaqhweshayo kuhlaselo zeza eJapan zaza zahlala ikakhulu eAzuma County (inxalenye esempuma yelizwe laseJapan). Ngo-716, 1799 amaKokuryoans atshintshelwa ngurhulumente welo xesha kwiPhondo laseMusashi, kwamisa isiphaluka esitsha, eKoma, Echongwa njengerhuluneli yesithili iKoma-no Kokishi Jakko wanikela ubomi bakhe kuphuhliso lweKawunti yaseKomani, wafela apho. Abantu baseKomani County babemhlonela kwaye bakha itempile ukuze bakhumbuze ukulunga kwakhe ngonaphakade. Ukusukela ngoko, le tempile ibikhonzwa ngabakhweli bentsapho yakwaKoma kude kube namhlanje, kwaye ifumana abanquli abaninzi.
Inombolo yomthetho: M110022401